။ အချိန် 6/06/2011 11:39:00 AM
။ အချိန် 5/08/2011 04:09:00 PM
။ အချိန် 4/20/2011 10:25:00 AM
။ အချိန် 4/09/2011 11:02:00 AM
။ အချိန် 3/28/2011 01:05:00 PM
Q. ဘုရားနှင့် ပစ္စေကဗုဒ္ဓါတို့၏ တူပုံနှင့် ခြားနာပုံများကို အသေးစိတ်လေးများ သိရှိခွင့်ရရင် သိရှိလိုပါသည် အရှင်ဘုရား။(www.bbfse.org)
A. ဘုရား၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ ခြားနားချက်ကို မပြောခင် ဗောဓိနဲ့၊ ဗောဓိသတ္တအကြောင်းကို အရင်ပြောပြဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလို ဗောဓိအကြောင်းကို ပြောမယ်ဆိုရင် သာဝကအကြောင်းလည်း ထည့်ပြောရမှာဖြစ်လို့ မေးခွန်းထဲမှာ မပါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ သာဝကအကြောင်းကိုပါ ထည့်သွင်းပြောကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗောဓိဆိုတာ မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်၊ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်တွေကို ပြောတာဖြစ်ပြီး ဒီဉာဏ်တော်တွေကို ရဖို့ကြိုးစားကာ ပါရမီဖြည့်ကြတဲ့ အလောင်းတော်တွေကို ဗောဓိသတ္တလို့ ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဗောဓိ၊ ဗောဓိသတ္တများဟာ အမျိုးအစားအနေနဲ့ သုံးမျိုးသုံးစား ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
၃။ သာဝကဗောဓိ ဆိုတဲ့ ဗောဓိသုံးမျိုးနဲ့ ဒီဗောဓိဉာဏ်ကို ရရှိဖို့ ပါရမီဖြည့်ကျင့်ကြတဲ့ ဗောဓိသတ္တများဟာလည်း
သာဝကဗောဓိသတ္တ ဆိုပြီး သုံးမျိုးသုံးစား ကွဲပြားကြပါတယ်။
ပါရမီဖြည့်ကျင့်တယ်ဆိုတာ ဒါန၊ သီလ၊ နေက္ခမ၊ ပညာ၊ ဝီရိယ၊ ခန္တီ၊ သစ္စာ၊ အဓိဋ္ဌာန်၊ မေတ္တာ၊ ဥပေက္ခာဆိုတဲ့ ပါရမီဆယ်းပါးကို ဘဝအမျိုးမျိုးမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြုလုပ်ဆည်းပူး ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကို ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဉာဏ်တွေကိုရဖို့ ပါရမီဖြည့်ကြတဲ့ အလောင်းတော်တွေဟာ ပါရမီပြည့်မြောက်ပြီး အဲဒီဉာဏ်အသီးသီးကို ရရှိတော်မူပြီးတဲ့ အခါမှာတော့
၁။ သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကို ရရှိတော်မူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကို သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရား (အလုံးစုံးကို သိတော်မူတဲ့ဘုရား)
၂။ ပစ္စေကဗောဓိဉာဏ်ကို ရရှိတော်မူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကို ပေစ္စေကဗုဒ္ဓ (ဘုရားငယ်)
၃။ သာဝကဗောဓိဉာဏ်ကို ရရှိတော်မူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကို (တပည့်သားအရိယာ သာဝက) လို့ ဖြည့်ကျင့်ပြီး ရရှိတဲ့ ဗောဓိဉာဏ်အလိုက် အမည်အဆင့်အတန်း ကွဲပြားကြပါတယ်။
သမ္မသမ္ဗောဓိသတ္တခေါ် သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့ ပါရမီဖြည့်ကျင့်တော်မူကြတဲ့ ဘုရားလောင်းတွေ အနေနဲ့ ပွင့်တော်မူပြီး ဘုရားတစ်ဆူဆူထံမှာ “ဘယ်အချိန်မှာ ဧကန်မုချ ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်”လို့ နိယတဗျာဒိတ် ရရှိတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာ ပညာကို အဓိကထားကျင့်တဲ့ ပညာဓိက ဘုရားလောင်းဆိုရင် လေးအသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း၊ သဒ္ဓါကို အဓိကထားကျင့်တဲ့ သဒ္ဓါဓိက ဘုရားလောင်းဆိုရင် ရှစ်အသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း၊ ဝီရိယကို အဓိကထားကျင့်တဲ့ ဝီရိယာဓိက ဘုရားလောင်းဆိုရင် တစ်ဆယ့်ခြောက်အသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ကြာအောင် ပါရမီတော်တွေကို ဖြည့်ကျင့်တော်မူပြီး ပါရမီတော် အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်တော်မူတဲ့ အခါမှာတော့ ဆရာမရှိဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် ထိုးထွင်းပြီး သစ္စာလေးပါးတရားကို သိတဲ့မဂ်ဉာဏ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အလုံးစုံအကုန်လုံးကို အကြွင်းမဲ့ သိမြင်တော်မူတဲ့ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတဲ့ သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်တော်ကို ရရှိတော်မူပါတယ်။ အဲဒီလို သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကို ရရှိတော်မူတဲ့ လောကသုံးပါးမှာ အတုမရှိ၊ အတူမရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကို သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ (သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရား)လို့ ခေါ်ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပစ္စေကဗောဓိသတ္တခေါ် ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ အလောင်းအလျာတွေ အနေနဲ့ နှစ်သင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ကာလကြာအောင် ပါရမီတွေကို ဖြည့်ကျင့်တော်မူပြီး ပါရမီပြည့်မြောက် အထွတ်အထိတ်ကို ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ဆရာမရှိဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် ထိုးထွင်းပြီး သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့ မဂ်ဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ ပစ္စေကဗောဓိဉာဏ်ကို ရရှိတော်မူပါတယ်။ အဲဒီလို ပစ္စေကဗောဓိဉာဏ်ကို ရရှိတော်မူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကို ပစ္စေကဗုဒ္ဓ (ဘုရားငယ်)လို့ ခေါ်ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သာဝကဗောဓိသတ္တခေါ် သာဝက အလျောင်းအလျာတွေ အနေနဲ့ အဂ္ဂသာဝကလောင်း (အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ အရှင်မဟာမေဂ္ဂလာန်တို့လိုမျိုး) ဆိုရင် တစ်သင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း၊ မဟာသာဝကလောင်း (အရှင်ကောဏ္ဍည၊ အရှင်အာနန္ဒာစတဲ့ ရဟန္တာမထေရ်ကြီးတွေလိုမျိုး) ဆိုရင် ကမ္ဘာတစ်သိန်း၊ ပကတိသာဝက (သာမန်အရိယာ သာဝကမျိုး) ဆိုရင် ကမ္ဘာတစ်ရာ၊ ကမ္ဘာတစ်ထောင်စတဲ့ ကာလကြာအောင် ပါရမီတွေကို ဖြည့်ကျင့်ပြီး ပါရမီပြည့်မြောက်တဲ့ အခါမှာတော့ မြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တဲ့ ဆရာရှိမှ သစ္စလေးပါးကိုသိတဲ့ မဂ်ဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ သာဝကဗောဓိဉာဏ်ကို ရရှိတော်မူပါတယ်။ အဲဒီလို သာဝကဗောဓိဉာဏ်ကို ရရှိတော်မူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်များကို အဆင့်အတန်းအလိုက် အဂ္ဂသာဝက၊ မဟာသာဝက၊ ပကတိသာဝကဆိုတဲ့ အမည်အသီးသီးနဲ့ သာဝကဗုဒ္ဓလို့ ခေါ်ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ဆုပန်ပြီး ပါရမီဖြည့်ကျင့်ကြတဲ့ သာဝကတွေအတွက် ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုမပန်ဘဲ သာမာန်ကိလေသာကုန်ခမ်း ရဟန္တာဖြစ်ကာ နိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့အတွက်တော့ သီးသန့်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ပါရမီဖြည့်ကျင့်ရာကာလ အတိအကျ မရှိပါဘူး။
ဗုဒ္ဓ၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ၊ သာဝကတွေရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်
အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို ပါရမီတွေကို အသီးသီးဖြည့်ကျင့်ပြီး သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါအဖြစ်၊ တပည့် အရိယာသာဝကလို့ခေါ်တဲ့ သာဝကဗုဒ္ဓအဖြစ်ကို ရရှိတော်မူကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်များထဲမှာ သဗ္ဗညု မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ကို တာရယိတုပုဂ္ဂိုလ် (ကိုယ်တိုင်လည်း သံသရာမှ ကူးမြောက်ပြီး ဝေနေယျတို့ကိုလည်း သံသရာမှ ထုတ်ဆောင်ကယ်တင်တော်မူတဲ့ အမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်)လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ အလုံးစုံကို အကြွင်းအကျန်မရှိ အကုန်အစင် သိတော်မူတဲ့ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကို ရရှိတော်မူတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ သစ္စာလေးပါးတရားတော်ကို ကိုယ်တော်တိုင်လည်း ထိုးထွင်းပြီး သိတော်မူသလို ကိုယ်တော်မြတ် သိတော်မူတဲ့ အတိုင်းလည်း ကျွတ်ထိုက်တဲ့ သတ္တဝါဝေနေယျတွေကို သူတို့ရဲ့ အလိုဆန္ဒကိုလိုက်ပြီး သစ္စာတရားကို သိအောင်ဟောပြော ချေချွတ်တော်မူနိုင်တဲ့အတွက် အတုမရှိ တာရယိတုပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို သတ္တဝါ ဝေနေယျတွေရဲ့ အလိုကိုသိပြီး သစ္စာတရားကို ဟောကြားပေးနိုင်မှုဟာ သဗ္ဗညုတ ဘုရားရှင်တွေပဲ စွမ်းဆောင်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အနှိုင်းမဲ့ဗုဒ္ဓ၊ အလုံးစုံကို အကုန်အစင်သိတော်မူတဲ့ ဘုရား၊ အတုမရှိမြတ်စွာလို့ ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပစ္စေကဗုဒ္ဓါတို့ကိုတော့ စာလို တရိတပုဂ္ဂိုလ် (မိမိကိုယ်တိုင်သာ သံသရာမှ ကိုယ်စွမ်းဖြင့် ကူးမြောက်နိုင်ပြီး သူတပါးတို့ကို သံသရာမှ ထုတ်ဆောင်ကယ်တင်မှု မပြုနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်) လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ အရှင်မြတ်တွေဟာ သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်များ ဖြစ်ပွင့်တော်မူတဲ့ အခါကာလမျိုးမှာ ဖြစ်ပွင့်ခြင်းမရှိဘဲ ဘုရားရှင်တစ်ဆူဆူတို့ရဲ့ ကြားကာလဖြစ်တဲ့ သာသနာပကာလမှာပဲ ပွင့်တော်မူကြပါတယ်။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ အရှင်မြတ်တွေဟာ သဗ္ဗညုဘုရားရှင်တွေလို သစ္စာတရားကို ကိုယ်တိုင်လည်းသိ၊ သူတပါးကိုလည်း သိစေနိုင်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာ ဆရာမကူဘဲ သစ္စာတရားကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ပြီး သူတပါးတွေကို သိအောင်ဟောပြနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ ပဋိဝေဓတရား အနက်သဘောကို ကိုယ်တိုင်သိမြင်ပေမယ့် အဲဒီမဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ လောကုတ္တရာ တရားကို နာမပညတ်တင်ကာ သူတပါးတို့သိအောင် ဟောပြောနိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဋ္ဌကထာ ဆရာတွေက “ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ အရှင်မြတ်တို့ရဲ့ သစ္စာလေးပါး တရားကို သိမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ ဓမ္မာဘိသမယကို စကားမပြောတတ်သူ အိမ်မက်မက်ခြင်းနဲ့တူကြောင်း ဥပမာပေး ပြောဆိုကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ အရှင်သူမြတ်တွေဟာ ရဟန်းပြုချင်ကြတဲ့ သူတပါးတို့ကို ရဟန်းပြုပေးပြီး “ဒီလိုသွား၊ ဒီလိုနေ၊ ဒီလိုထိုင်၊ ဒီလိုပြော” စသဖြင့် အာဘိသမာစရိက ကျင့်ဝတ်ကို သင်ကြားပေးတော်မူနိုင်ပေမယ့် “ဒီလိုရုပ်နာမ်ကို ခွဲခြားပြီး လက္ခဏာယဉ် တင်ရမည်၊ ဒီလို ရှုမှတ်ရမည်” စသဖြင့် နာကြားသူတွေကို မဂ်ဖိုလ်ရောက်လောက်အောင် တရားဓမ္မ ဟောပြောပြသတော် မမူနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပစ္စေက ဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်တွေကို ကိုယ်တိုင်သာသိပြီး သူတပါးကို သိစေတော်မမူနိုင်တဲ့ အငယ်စားဘုရား၊ ဘုရားငယ်လို့ ခေါ်ဆိုတော်မူခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သာဝကဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူကြတဲ့ တပည့်သား အရိယာသာဝကတွေကို တာရိတပုဂ္ဂိုလ် (အထုတ်အဆယ် အကယ်အတင်ခံပုဂ္ဂိုလ်) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သာဝကဗုဒ္ဓလို့ သုံးလိုက်တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မြတ်စွာဘုရားရှင်လိုမျိုး ဘုရားလို့ အဓိပ္ပါယ် အမှတ်မလွဲဖို့လိုပါတယ်။ ဒီမှာပြောတဲ့ ဗုဒ္ဓဆိုတာ သစ္စာတရားကို သိမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ သုံးတဲ့စကားလုံး ဖြစ်ပြီး တပည့်သာဝကအနေနဲ့ သစ္စာတရားကို သိခြင်းလို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့က အရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်း ဥပတိဿပရိဗိုဇ်ဟာ အရှင်အဿဇိ မထေရ်ထံမှ တရားတော်ကို နာယူပြီး သောတာပတ္တိမဂ်ဖိုလ်၌ တည်တော်မူတဲ့ အချက်ကိုထောက်ပြီး တပည့်သား အရိယာသာဝကတို့ကို ကိုယ်တိုင်လည်း အကယ်တင်ခံ၍ သူတပါးတို့ကိုလည်း ကယ်တင်တော်မူတတ်တဲ့ (တာရယိတု)ပုဂ္ဂိုလ်လို့ ထင်မှတ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ တပည့်သား အရိယာ သာဝကတို့ ဟောကြားကြတဲ့ တရားများဟာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှ စတင်ဖြစ်ပေါ်တော်မူခဲ့တဲ့အပြင် ဘုရားရှင်၏ လမ်းညွှန်မပါဘဲ ကိုယ်တိုင်သီးခြား နည်းတပါးနဲ့ ဟောကြားခြင်း မဟုတ်တဲ့အတွက် တပည့်သား အရိယာသာဝကတွေကို တာရယိတုပုဂ္ဂိုလ်လို့ မခေါ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တပည့်သာဝက အရိယာတွေကို ဆရာမရှိဘဲ သစ္စာလေးပါးကို မသိနိုင်ဘဲ ဆရာအကူအညီ ရမှသာ သစ္စာလေးပါးကို ဟောကြားနိုင်၊ မဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ်တို့ကို ရနိုင်တဲ့အတွက် တာရိတပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲ ခေါ်ဆိုနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ လူတော်တော်များများ မရှင်းဘဲ ဖြစ်နေကြတဲ့ ဗုဒ္ဓ၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ၊ သာဝကတို့ရဲ့ ခြားနားချက်လေးတွေကို အထိုက်အလျောက် နားလည်သဘောပေါက်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မေးခွန်းရှင် မေးထားသလို ဘုရားနဲ့ ပစ္စေကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ တူညီချက် ခြားနားချက်ကိုပဲ သီးသန့်ထုတ်ပြောပါဆိုရင်တော့ ဘုရားနဲ့ ပေစ္စကဗုဒ္ဓတွေဟာ ဖြည့်ကျင့်တော်မူကြတဲ့ ပါရမီ အရေအတွက်၊ ဖြည့်ကျင့်ပုံ တူညီခြင်း၊ သစ္စာလေးပါး တရားတော်ကို ဆရာမကူဘဲ ကိုယ်တော်တိုင် ထိုးထွင်း၍ သိမြင်တော်မူခြင်း ဆိုတဲ့ အချက်တွေလောက်တော့ တူညီတယ်လို့ ပြောလို့ရနိုင်ပြီး မတူညီတဲ့ အချက်တွေဆိုရင်တော့ ပါရမီဖြည့်ကျင့်တဲ့ ကာလမတူညီခြင်း၊ သစ္စာလေးပါးကို သူတပါးသိအောင် ဟောပြောနိုင်မှု မတူညီခြင်း၊ ရရှိတော်မူတဲ့ ဉာဏ်တော်မတူညီခြင်း၊ ပွင့်တော်မူတဲ့ အချိန်ကာလ မတူညီခြင်းစတဲ့ အချက်တွေပဲလို့ အကြမ်းဖျင်း နားလည်ထားရင်လည်း လုံလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။
မိမိတို့အနေနဲ့ကတော့ ပါရမီဖြည့်ပြီး ပါရမီအစဉ်အတိုင်းပဲ နိဗ္ဗာန်ကို သွားမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် သံသရာ တစ်လျှောက်မှာ ဖြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ပါရမီအားကိုယူပြီး ဒီဘဝမှာပဲ ဘဝနာအလုပ် အားထုတ်ရင်း ကိလေသာကင်းရာ နိဗ္ဗာန်ကို ယူကြမှာလားဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပဲ အားထုတ်ကြည့်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါကြောင်း အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။
ကျမ်းကိုး = မဟာဗုဒ္ဓဝင် (ပထမတွဲ၊ ပထမပိုင်း)၊ မင်းကွန်းတိပိဋကဓရ ဆရာတော်
ဘ၀ဆက်တိုင်း သရဏဂုံတည်အောင် ဘယ်လိုပါရမီတွေ ဖြည့်ကျင့်သင့်သလဲ
။ အချိန် 10/28/2010 07:00:00 PM
ရိုသေစွာ ရှိခိုးဦးတင်လိုက်ပါတယ်ဘုရား။ အရှင်ဘုရားရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာကိုလည်း အခါအားလျော်စွာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု မှတ်သားဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း ပို့စ်အသစ်တွေတင်နိုင်ပြီး စိတ်ရှည်စွာ ဟောညွန်ပြပေးတဲ့အတွက် ဝင်ရောက်မှတ်သား သူတွေအတွက် ယူတတ်မယ်ဆိုရင် အလွန်အကျိုးရှိလှပါတယ် ဘုရား။ တပည့်တော် အကြိုက်ဆုံးကတော့ နဲနဲလေးတော့ လွဲနေတယ် ဆိုတဲ့ ပို့စ်များပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။
တပည့်တော်မေးမြန်းချင်တာနဲ့ အကြံပြုချင်တာလေးတွေရှိပါတယ်ဘုရား။ ခွင့်ပြုပေးတော်မူပါ။ အရှင်ဘုရားရဲ့ စာမျက်နှာမှာ Facebook like button လေးကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆို ထည့်ပေးစေလိုပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော် ဖတ်လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရာတစ်ခုကို facebook မှာ အမြဲ share ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။ အရှင်ဘုရားရဲ့ စာမျက်နှာမှာလည်း like button လေးရှိရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်မိပါတယ်ဘုရား။
တပည့်တော် သိချင်တာလေးကတော့ တပည့်တော်တို့ ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပြီး သရဏဂုံတည် နေတယ်ဆိုပေမဲ့ ယခုဘဝမှာ ပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့သာ သေဆုံးခဲ့ရမယ်ဆိုရင် တပည့်တော်တို့ဟာ လောကီ သရဏဂုံသာ တည်နေတာဖြစ်လို့ နောင်ဘဝမှာ အပါယ်ဘုံဘဝသို့ မရောက်ပဲ လူ့ဘုံမှာ ပြန်သန္ဓေ တည်ခဲ့ရသည့်တိုင် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားဓမ္မနဲ့ သွေဖယ်တဲ့ အယူဝါဒကို ယုံကြည်သက်ဝင်သူ ဖြစ်သွားမှာကို စိုးရိမ်မိပါတယ်ဘုရား။ နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စပ်ကြား ဘဝတိုင်းမှာ သရဏဂုံတည်အောင် ဘယ်လိုပါရမီတွေ ကျင့်စဉ်တွေ ဆည်းပူးရမယ်ဆိုတာ လမ်းညွန်ပေးစေလိုပါတယ်ဘုရား…။
မေတ္တာဖြင့် အလင်းဓါတ်တွေ ထွန်းညှိပေးသောအရှင်ဘုရား
A. မင်္ဂလာပါ ဒကာ သူရိန်...
ဘုန်းဘုန်းရဲ့ စာတွေက စာဖတ်သူတွေအတွက် တစ်စုံတစ်ခု အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၀မ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်။ ဒကာရဲ့ အကြံပြုချက်ကို ကျေးဇူးတင်စွာလက်ခံပြီး အဆင်ပြေအောင် ဆောက်ရွက်လိုက်ပါမယ်။
မေးထားတဲ့ အမေးအတွက် ဖြေကြားပေးရမယ်ဆိုရင် သရဏဂုံကို တည်မြဲအောင် ကြိုးစားတာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုထုဇင်တွေဟာ သဒ္ဓါတရား မခိုင်မြဲသေးတဲ့အတွက် သေပြီးနောက်ဘ၀မှာ ဘာဖြစ်မယ် ဘယ်လိုဘုံမှာ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ အတိအကျ ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကကတော့ သေခါနီးစိတ်အစဉ်ဟာ သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ သေခါနီးမှာ ဟိုစွဲဒီစွဲ မစွဲမိဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီလို သေခါနီးမှာ သတိမြဲဖို့အတွက် မသေခင် လေ့ကျင့်ထားတဲ့ သမထအကျင့် ၀ိပဿနာ အကျင့်ကလည်း အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ၀ိပဿနာအကျင့်က ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ သရဏဂုံကို မြဲမြံစွာဆောက်တည်ထားတာဟာ အလွန်ကောင်းပေမယ့် သေခါနီးကာလအထိ အဲဒီသရဏဂုံကို ဆောက်တည်ထားတဲ့ စိတ်နဲ့သေသွားနိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ အချက်ကလည်း စဉ်းစားစရာပါ။ သေသွားတဲ့အထိ သရဏဂုံတည်တဲ့ စိတ်နဲ့နေနိုင်အောင် ကြိုးစားနိုင်ရင်တော့ ဘာမှ အထွေအထူး ပြောစရာမရှိဘဲ ဒီသရဏဂုံကို လုံခြုံတဲ့ စိတ်အစဉ်ကြောင့် သေပြီးနောက်ဘ၀မှာ သုဂတိဘ၀မှာ ဖြစ်မှာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ ကြုံနေတဲ့ ကာလမှာ သရဏဂုံတည်တဲ့ စိတ်နဲ့သေပြီး လူ့ပြည်မှာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ အယူဝါဒ လွဲမှားစရာ မရှိနိုင်ပါဘူး။ သေချာပေါက် ရတာနသုံးပါးကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခွင့်ရတဲ့ ဘ၀မှာ ဖြစ်စေမှာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် အထူးသတိပြုရမှာက သေခါနီးကာလမှာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာ သရဏဂုံကို အာရုံပြုပြီး သေသွားနိုင်ပါမလား ဆိုတဲ့အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သေခါနီးမှာ ဝေဒနာ ပြင်းထန်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားအာရုံတစ်ခုခုကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သရဏဂုံကို အာရုံမပြုနိုင်ဘဲ သတိလက်လွတ် ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ သုဂတိဘ၀မှာ ဖြစ်ဖို့မလွယ်နိုင်ပါဘူး။ အပါယ်ဘုံကို ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒကာပြောသလို စစ်မှန်တဲ့ တရားဓမ္မတွေနဲ့ သွေဖီသွားနိုင်စရာ ရှိပါတယ်။ သေခါနီးမှာ သရဏဂုံကို စွဲမြဲတဲ့ စိတ်အာရုံနဲ့ သေသွားရင်တော့ သုဂတိဘ၀နဲ့ သရဏဂုံတည်မှုရယ်၊ အယူဝါဒ မှန်ကန်မှုရယ်ကတော့ လွဲနိုင်စရာ မရှိပါဘူး။
အရေးကြီးဆုံးကတော့ သရဏဂုံတည်မြဲအောင် ကြိုးစားထားတာ ကောင်းပေမယ့် ၀ိပဿနာ တရားအားထုတ်ပြီး သေဖို့ပြင်ဆင်တာက အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ိပဿနာ အားထုတ်မှုဟာ ပါရမီအလျောက် ဒီဘ၀မှာ တရားထူးရတဲ့သူ ရှိသလို၊ မရတဲ့သူလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ တရားထူးမရပေမယ့် ၀ိပဿနာတရားကို စွဲစွဲမြဲမြဲအားထုတ်ထားသူ တစ်ယောက်ဟာ သတိကတော့ မြဲနေနိုင်ပါတယ်။ သတိမြဲနေမယ်ဆိုရင် သေခါနီးမှာလည်း အခြားအာရုံအစွဲတွေ မ၀င်နိုင်အောင် ထိန်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားအားထုတ်လေ့ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ သေခါနီးမှာ ဝေဒနာ တစ်ခုခု ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ဝေဒနာကို ရှုမှတ်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့် ရှိနေနိုင်တဲ့အတွက် ဝေဒနာပြင်းလေ၊ အမှတ်ပြင်းလေဖြစ်ကာ တစ်ခြား အာရုံတွေ မ၀င်နိုင်အောင် ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသတိရှိပြီး သေသွားတဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက်တော့ သုဂတိဘ၀မှာ ဖြစ်ဖို့နဲ့ အယူဝါဒ မှန်ကန်ဖို့ဆိုတာ သေချာသလောက်ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် နိဗ္ဗာန်မရမီစပ်ကြား ဘ၀တိုင်းမှာ သရဏဂုံတည်အောင် ဘယ်လိုပါရမီတွေ ဖြည့်ကျင့်ရမယ် ဆိုတာထက် ဒီဘ၀မှာပဲ သရဏဂုံတည်အောင် ကြိုးစားရင်း သတိမြဲစေတဲ့ ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်မှုကို ကြိုးစားအားထုတ်ကာ သေခါနီးမှာ သတိခိုင်အောင်လုပ်ပြီး သုဂတိဘ၀ကို ရောက်စေနိုင်တဲ့ အထုံပါရမီကို ဖြည့်ကျင့်တာ ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ အကြံပြု ဖြေကြားလိုပါတယ်။
။ အချိန် 9/28/2010 07:12:00 PM
။ အချိန် 9/20/2010 08:17:00 AM
။ အချိန် 9/13/2010 06:33:00 PM
။ အချိန် 8/19/2010 01:39:00 PM
2 Aug 10, 01:00 AM
၁၀ ပါးသီလ ဆောက်တည်ချင်ရင် လက်ဝယ်ရှိငွေကို တစ်နေရာရာ သိမ်းထားပြီး ယူမသုံးဘဲ ရက်အကန့်အသတ်နဲ့ နေပြီး ဆောက်တည်လို့ ရပါလားဘုရား။
2 Aug 10, 05:52 AM
ဆောက်တည်လို့ ရပါတယ်။ အဓိကကတော့ သီလဆောက်တည်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ရွှေငွေပိုက်ဆံကို ကိုင်ခြင်းကို မပြုဖို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပုသ်သီလ ဆောက်တည်သလိုမျိုးပေါ့။ ဥပုသ်နေ့တစ်နေ့မှာ အဲဒီသီလတွေကို ထိန်းနေဖို့ပဲ ဖြစ်သလို ဆယ်ပါသီလကိုလည်း ကိုယ်သတ်မှတ်တဲ့ အချိန်ကာလအတောအတွင်း လိုက်နာကျင့်သုံး နေထိုင်နေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
5 Aug 10, 07:30 PM
အချို့ အိပ်ဆေး၊ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး၊ အပြင်းစား အကိုက်အခံပျောက်ဆေးတွေက ကြာကြာသောက်ရင် စွဲတတ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေး အာနိသင် ပါတဲ့ဆေးတွေလဲ ပါပါတယ်။ ဆရာဝန်က သောက်ခိုင်းလို့ သောက်ရင် သူရာမေရယ သိက္ခာပုဒ် ထိခိုက်နိုင်ပါလားဘုရား...
6 Aug 10, 05:19 AM
တမင်တကာ မူးယဇ်လိုတဲ့အတွက် သောက်သုံးတာမဟုတ်ဘဲ ကျန်းမာရေးအရ၊ လိုအပ်လို့ ဆရာဝန် ညွန်ကြားတဲ့ အတိုင်း သောက်သုံးတာဟာ သုရာမေရယ သိက္ခာပုဒ်ကို မထိခိုက်ပါဘူး။ အပြစ်လည်း မဖြစ်၊ ကံလည်း မမြောက်ပါဘူး။
9 Aug 10, 02:17 AM
၉ ပါးသီလကို ၈ ပါးသီလနဲ့ အတူတူပဲ၊ မေတ္တာက ဘာဝနာမို့ သီလထဲ ထည့်စရာ မလိုလို့ ဖတ်ရဖူးပါတယ်။ ၉ ပါး စောင့်ရမလား ၈ ပါးစောင့်ရမလား ဘုန်းဘုန်း...
9 Aug 10, 02:57 AM
မနာပဒါယီ >>> ဇေယျာ
စာပေမှာ ကိုပါးသီလအဖြစ် မေတ္တာပွားပြီး နေထိုင်ခြင်းကို သီလတစ်ခုအနေနဲ့ ဆောက်တည်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆောက်တည်ပြီး မေတ္တာမပွားနိုင်ရင် သီလသိက္ခာပုဒ်ကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက် ၈ပါးသီလကို ဆောက်တည်ပြီး စွမ်းနိုင်သမျှ မေတ္တာပွားပြီး နေနိုင်မယ်ဆိုရင် သာမန်လူတွေအနေနဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန် သင့်လျော်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၈ပါးသီလပဲ ဆောက်တည်ပြီး အချိန်ရရင် မေတ္တာပါ ပွားပြီးနေကြည့်စေလိုပါတယ်။
15 Aug 10, 06:24 AM
တပည့်တော် ကြက်ဥကို ခွဲပြီး ကြော်ချက်စားလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒါ ပါဏာတိပါတ ဖြစ်ပါသလားဘုရား...။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ လှူဒါန်းခြင်းကို လက်မခံဘဲ ငွေကြေးသာ စုဆောင်းလိုတဲ့ ဇနီးကို ကွာရှင်းခွင့် ရှိမရှိ သိချင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှု မရှိသော်လည်း အလှူဒါနမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲလာရင် ကွာရှင်းပါက လောကကြောင်း ဓမ္မကြောင်းအရ မှန်လားမှားလား သိချင်ပါတယ် အရှင်ဘုရား...။
16 Aug 10, 06:06 AM
ပါဏာတိပါတ ကံမြောက်နိုင်တဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေဖြစ်တဲ့ ၁။ သက်ရှိလည်းဖြစ် ၂။ သတ္တ၀ါလို့လည်း မှတ်ယူ ၃။ သေစေလိုတဲ့ စေတနာလည်းရှိ ၄။ လုံ့လအားထုတ်မှုလည်းပြု ၅။ သေလည်းသေ ဆိုတဲ့ အချက်တွေ့အရ တစ်ကြောင်း၊ ဒီကနေ့ စားနေကြတဲ့ ကြက်ဥများဟာ ဓာတ်နဲ့ဖောက်ထားတဲ့ အသက်ရှင်စေနိုင်တဲ့ ရုပ်ဇီဝိတ နာမ်ဇီဝိတတွေ မရှိတဲ့ ကြက်ဥတွေ ဖြစ်နေတာကတစ်ကြောင်း ဒီအကြောင်း နှစ်မျိုးကြောင့် ဒီနေ့ခေတ် ဓာတ်ကြက်ဥတွေ စားမှုဟာ ပါဏာတိပါတကံ မမြောက်ဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်မွေးကြက်တွေရဲ့ ဥတွေမှာတော့ ရုပ်သက်နာမ်သက်တွေရှိပြီး အကောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ သဘောတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ဒီကြက်ဥတွေကို စားသုံးရာမှာတော့ ပါဏာတိပါတ ကံမြောက်နိုင်ပါတယ်။
သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်လို့ နှစ်ဦးသဘောတူ ကွာရှင်းမှုမှာ ဓမ္မကြောင်းအရတော့ အပြစ်အထွေအထူး ရှိတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လောကကြောင်းအရတော့ လူ့လောကပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်း သတ်မှတ်ချက်တွေအရရယ် ကွာရှင်းမှုရဲ့ အကြောင်းပြချက်က အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် မဟုတ်ဘဲ အလှူဒါန မလုပ်ရတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဆိုတဲ့အတွက်ရယ်ကြောင့် ဒီအပေါ်မှာ နည်းနည်းစဉ်းစားဖို့တော့ လိုပါတယ်။ အလှူဒါန ပြုလုပ်မှုတစ်ခုတည်းကြောင့် ဆိုရင်တော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ညှိနှိုင်းကြည့်တာ ကောင်းပါတယ်။ လှူတာကောင်းပေမယ့် နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန်နဲ့ အစွန်းမရောက်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတဲ့ ၀ိသာခါ ဒကာမကြီးလို ဘာသာတရားအပေါ် ကြည်ညိုလေးစားမှု မရှိသူတွေကို ကြည်ညိုလေးစားလာအောင် လုပ်တဲ့နည်းကို အတုယူပြီး ဒါနလုပ်ဖို့ အားမသန်တဲ့သူကိုလည်း အလှူဒါနအပေါ် စိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အတွက်လည်း အကျိုးရှိ၊ လောကကြောင်းအရလည်း အပြစ်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို အလွယ်တကူ ကွာရှင်းပြတ်စဲကြတာထက် သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစွန်းမရောက်အောင်တော့ ချင့်ချိန်လုပ်တာ ကောင်းပါတယ်လို့ပဲ အကြံပြုလိုပါတယ်။
ဥပုသ်နေ့မဟုတ်တဲ့ ဥပုသ်သီလ၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ရွေးချယ်မှု…
။ အချိန် 7/09/2010 10:12:00 AM
တပည့်တော်အား ပြန်လည်ဖြေကြား ရှင်းလင်းပေး၍ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ အောက်ပါမေးခွန်း များကိုလည်း ဖြေကြားပေးပါဘုရား...
၁။ ဥပုသ်နေ့ မဟုတ်သော စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များ၌ ဥပုသ်စောင့်၍ ရနိုင်ပါသလားဘုရား
၂။ တပည့်တော် ၀ါဆိုသင်္ကန်းအား မိမိကိုယ်တိုင် ၁စုံလှူ၍ ကျန်သင်္ကန်း ၅စုံအား အသိမိတ်ဆွေ မရှိဆင်းရဲသား အသက်ကြီးသူများအား လှူဒါန်းချင်ပါသည်။ သူတို့ သေဆုံးသွားသောအခါ သင်္ကန်းအလှူဒါန အကျိုးပါသွားစေ ချင်ပါသည်။ မိမိကိုယ်တိုင် ၆စုံလုံး ကပ်လှူခြင်းနှင့် ၎င်းတို့အား ပေးလှူခြင်း မည်သည့်အရာက အကျိုးများပါသလဲဘုရား။
တပည့်တော်များသောအားဖြင့် ဆင်းရဲသူများ၊ ဒုက္ခရောက်သူများအား လှူဒါန်းလေ့ရှိပြီး အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် မြတ်မမြတ်ကို သိပ်မကြည့်ဖြစ်ပါ။ ဘုန်းဘုန်း၏ ပြန်ကြားစာတွင် ၎င်းအချက်ပါရှိပါ၍ တပည့်တော် သင်္ကန်း၆စုံလုံးကို သီလနှင့်ပြည့်စုံသည့် ဆရာတော်ကြီးများအား ကိုယ်တိုင်ကပ်လှူလျင် ကောင်းမည်လားဟု ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေပါသည်ဘုရား။ မည်သည့်အရာက အကျိုးများမည် ဖြစ်ပါသလဲဘုရား။ ယခုမှစ၍ ဆင်းရဲသားများထက် မွန်မြတ်သော ဆရာတော်ကြီးများအား လှူဒါန်းခြင်းကို ဦးစားပေးလျှင် ကောင်းမည်ဖြစ်ပါသလားဘုရား…။
(MYANMAR TASAKI CO., LTD.)
A. ၁။ မင်္ဂလာပါ ဒကာမရေ… ဥပုသ်နေ့မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားနေ့တွေမှာလည်း ဥပုသ်သီလကို စောင့်ထိန်းနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်စောင့်ထိန်းနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ တကယ်တော့ ဥပုသ်သီလဆိုတာ တပတ်မှာ တစ်ရက်လောက်တော့ သီလကို အထူးစောင့်ထိန်း စေလိုတဲ့အတွက် ဥပုသ်နေ့မှာ သတ်မှတ်ပေးပြီး ရှစ်ပါး၊ ကိုးပါးသီလများကို စောင့်ထိန်းဖို့ အထူးသတ်မှတ်ပေးတဲ့ သီလဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းနိုင်ရင်တော့ နေ့စဉ်စောင့်ထိန်းနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ငါးပါးသီလထက်ပိုလွန်ပြီး မေထုန်မလိုက်စားဖို့၊ နေ့လွဲညစာမစားဖို့၊ ကခြင်းတီးခြင်းသီဆိုခြင်းများ မလုပ်ဖို့၊ အမွေးနံ့သာ မလိမ်းဖို့၊ နူးညံ့လှတဲ့ အိပ်ရာနေရာတွေမှာ မနေထိုင်ဖို့ စသဖြင့် ပညတ်ပေးထားတဲ့ ရှစ်ပါးကိုးပါး သီလများကိုကြည့်ရင် ကာမဂုဏ်အာရုံတွေ၊ ကိလေသာတရားတွေကို မလုပ်ဖြစ်အောင်၊ မကျူးလွန်မိအောင် ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံ ၀စီကံတွေကို ချုပ်တီးနိုင်အောင် သီလနဲ့ ထိန်းစေလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရှစ်ပါး ကိုးပါးသီလများဟာ ဥပုသ်နေ့မှ မဟုတ်ဘဲ ကျန်တဲ့နေတွေမှာလည်း ထိန်းနိုင်ရင် အကုသိုလ် အဖြစ်နည်းပြီး ကိလေသာလျော့နည်း စေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နေ့စဉ်စောင့်ထိန်းနိုင်ရင် ကောင်းပါတယ်လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပုသ်နေ့ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့နေ့တွေမှာလည်း စောင့်ထိန်းကောင်းပါတယ်လို့ သိစေလိုပါတယ်။
၂။ အလှူဒါနကတော့ စေတနာသုံးတန်ပြဋ္ဌာန်းပြီး ပြတ်သားစွာ လှူမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို မဆို လှူဒါန်းနိုင်ပြီး အလှူကုသိုလ်မြောက်ကာ ကုသိုလ်ရပါတယ်။ အကျိုးပေးအနေနဲ့သာ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကို လိုက်ပြီး ကွဲပြားတာဖြစ်ပါတယ်။ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့ ၁။ တိရိစ္ဆာန်သတ္တ၀ါများ ၂။ လူဒုဿီလခေါ် တံငါမုဆိုးစသော ဒုစရိုက်မှု ပြလုပ်သူများ ၃။ လူသီလ၀န္တခေါ် သာသနာပအခါမျိုး၌ ငါးပါးသီလမြဲသူများ ၄။ ရသေ့ပရိဗိုဇ်ခေါ် သာသနပအခါ ဈာန်အဘိညာဉ်ရ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ၅။ သောတာပတ္တိမဂ္ဂန်ပုဂ္ဂိုလ် ၆။ သောတာပတ္တိဖလဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ် ၇။ သကဒါဂါမိမဂ္ဂဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ် ၈။ သကဒါဂါမိဖလဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ် ၉။ အနာဂါမိမဂ္ဂဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ် ၁၀။ အနာဂါမိဖလဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ် ၁၁။ အရဟတ္တမဂ္ဂဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ် ၁၂။ အရဟတ္တဖလဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ် ၁၃။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ ၁၄။ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် (၁၄) ယောက်ထဲမှာ ယုတ်စွအဆုံး တိရိစ္ဆာန်ကိုတောင် စေတနာအပြည့်နဲ့ ကျွေးမွေးလှူဒါန်းရင် ကုသိုလ်ရပြီး ဘ၀ပေါင်း တစ်ရာအထိ ကောင်းမှုအကျိုးပေးကြောင်း၊ တိရိစ္ဆာန်ထက် သီလမရှိတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်ကို လှူဒါန်းရင်လည်း ဘ၀ပေါင်း တစ်ထောင်အထိ အကျိုးပေးကြောင်း စသဖြင့် အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် မြင့်မြတ်တာနဲ့ အလှူရဲ့ အကျိုးကြီးမှုလည်း ကွာခြားသွားကြောင်း စာပေတွေမှာ ဖွင့်ဆိုရှင်းပြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဒကာမရဲ့ အလှူကတော့ ဘယ်လိုမျိုး အနေနဲ့ပဲလှူလှူ စေတနာပြဋ္ဌာန်းပြီးသား ဖြစ်လို့ အကျိုးပေးကောင်းပြီး ကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အထူးပြောစရာ မရှိပါဘူး။ အကျိုးပေးကြီးမှု မကြီးမှုကတော့ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် အပိုင်းနဲ့ဆိုင်သွားပါပြီ။ ဒကာမရဲ့ စေတနာကတော့ ပြည့်စုံနေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုထုဇင်တွေဖြစ်နေသမျှ စေတနာသဒ္ဓါတရားက မခိုင်မြဲသေးတဲ့အတွက် စေတနာကွက်တာ၊ သဒ္ဓါကွက်တာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ရွေးချယ်ပြီး လှူဒါန်းကြဖို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်က ပုထုဇင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရွေးချယ်ရာမှာ သီလပြည့်စုံမှု ရှိမရှိ အတိအကျ မသိနိုင်တာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ် အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးပြီး အကျင့်လွဲနေတဲ့ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အချို့လည်း ရှိနေတဲ့အတွက် အလှူဒါနပြုတဲ့အခါမှာ ယုံကြည်မှုနဲ့ စူးစမ်းဆင်ခြင်မှုကို ညီမျှအောင် ပြုဖို့လိုတယ်လို့ ဆိုကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၀ါဆိုသင်္ကန်းလှူဒါန်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒကာမသိချင်တာလေးကို ပြောရမယ်ဆိုရင် သင်္ကန်းတစ်စုံပဲလှူလှူ အများကြီးပဲလှူလှူ စေတနာကောင်းရင် အလှူကြီးပြီး စေတနာနည်းရင် အလှူသေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒကာမ လှူလိုတဲ့ တစ်စုံဟာ စေတနာအရ ကြီးနေမယ်လို့ ယုံကြည်သလို သူများတွေကိုလည်း ဒါနအကျိုးကို ရစေလိုတဲ့အတွက် ပေးလှူစေတာဟာလည်း စေတနာရော မေတ္တာပါ ပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့အတွက် ဒကာမအာရုံပြုထားသလို ကိုယ်ကတစ်စုံပဲလှူပြီး ကျန်ငါးစုံကို မရှိဆင်းရဲသားတွေကို ပေးလှူစေတာ ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။ အကျိုးပေးအနေနဲ့ကလည်း ကိုယ်လှူတဲ့ တစ်စုံအတွက်လည်း ကုသိုလ်ရပြီးသား ဖြစ်နေသလို သူတစ်ပါးတို့အားလည်း ပေးလှူစေတဲ့အတွက် သူတို့လည်း ကုသိုလ်ရသလို သူတို့လှူတိုင်းလှူတိုင်း ကိုယ့်မှာလည်း ကုသိုလ်တွေ တိုးနေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒကာမအနေနဲ့ သင်္ကန်း၆စုံလုံးကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း လှူဒါန်းတာထက် ကိုယ်လည်းလှူ သူများတွေကိုလည်း ပေးလှူစေတာက ပိုအကျိုးကြီးကြောင်း အကြံပြုလိုပါတယ်။
နောက်တစ်ချက် ဒကာမမေးထားသလို မရှိဆင်းရဲသား ဒုက္ခရောက်နေသူများထက် သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေကိုပဲ သင်္ကန်း၆စုံလုံး လှူရင်ကောင်းမကောင်းဆိုတဲ့ အချက်ကတော့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ အလှူလှူတဲ့အခါ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရွေးချယ်ပြီး လှူသင့်တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်လှူတဲ့ ပစ္စည်းဝတ္ထုရဲ့ အသုံးတည့်မှု မတည်မှု အချိန်အခါ ညီမှုမညီမှုတွေကိုလည်း ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရွေးချယ်ပြီး လှူဒါန်းတာဟာ လှူဒါန်းတဲ့အခိုက်မှာ အကျိုးကြီးပေမယ့် အလှူဝတ္ထုရဲ့ အသုံးကျမှုကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ သိပ်မရှိလှပါဘူး။ ဆိုကြပါစို့ သီလသမာဓိနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ နာမည်ကြီး ဆရာတော်ကြီးတွေကို ကိုယ်ကလှူလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းဟာ ဆရာတော်ကြီးများအတွက် ကိုယ့်လိုပဲ လှူဒါန်းသူတွေများနေတော့ ကိုယ့်အလှူကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုချင်မှ ပြုနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ကးန်လှူလည်း သင်္ကန်းကို တစ်နေရာမှာ ချောင်ထိုးထားရင်လည်း ထားနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍များ အဲဒီသင်္ကန်းတွေကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေတဲ့ စာသင်သားလေးတွေ၊ မပြည့်စုံတဲ့ ကျောင်းတိုက်လေးတွေ၊ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာလေးတွေမှာ လှူဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့အလှူပစ္စည်းဟာ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေ အတွက်လည်း အကျိုးကြီးပြီး သူတို့တွေ ၀တ်ရုံသုံးဆောင်တိုင်းလည်း ကိုယ့်မှာကုသိုလ် တိုးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုဝမ်းသာစရာက အလှူဒါနကို လိုအပ်နေတဲ့နေရာမှာ လိုနေတဲ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ပေးတဲ့ သဘောမျိုး လှူလိုက်ရတဲ့အတွက်လည်း ပိုပြီးဝမ်းသာ ကြည်နူးစရာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလှူဒါနဟာ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ပြီး အကျိုးအကြီးအသေး ကွာခြားတယ်ဆိုပေမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းကို လှူဒါန်းတာထက် အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အများကို ရည်ရွယ်ပြီး လှူဒါန်းတာက ပိုပြီးအကျိုးကြီးစေပါတယ်။ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် ၁၄ယောက်ထဲမှာ အမြတ်ဆုံးအလှူခံဖြစ်တဲ့ မြတ်စွာဘုရားကလည်း မိထွေးတော် ဂေါတမီက မိမိကို ရည်မှန်းပြီး လှူဒါန်းလာတဲ့ အလှူအတွက် “ဂေါတမီ... သံဃာအား ပေးလှူလော့၊ သင်သည် သံဃာကို ပေးလှူသည်ရှိသော် ငါဘုရားကိုလည်း ပူဇော်ပြီး ဖြစ်လတ္တံ့၊ သံဃာကိုလည်း ပူဇော်ပြီး ဖြစ်လတ္တံ့” (ဒက္ခိဏ၀ိဘင်္ဂသုတ်) လို့ သံဃိက အလှူရဲ့ အကျိုးကြီးပုံကို မိန့်တော်မူပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဘုရားကို လှူတာထက် သံဃာကို လှူတာက ပိုမြတ်ပြီး ပိုအကျိုးကြီးတာကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သံဃိက အလှူရဲ့ အကျိုးကြီးမှုကို ရည်ရွယ်လိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဘုရားရှင်ကသာ အမြတ်ဆုံး အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရော သံဃာတော်ရော တစ်ပေါင်းတည်း လှူနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံး အလှူပဲပေါ့။ တကယ်တော့ သံဃာဆိုတာ အဖွဲ့အစည်း အပေါင်းအစည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပါးချင်းအနေနဲ့ သီလတွေ ချို့ယွင်းနိုင်ပေမယ့် သံဃာအများဖြစ်သွားတဲ့အခါ သီလမရှိသူလည်း သံဃာ့အားနဲ့ သံဃာတောထဲမှာဆိုရင် သံဃာလိုပဲ အကျိုးကျေးဇူးကို အပြည့်အ၀ပေးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ ဒကာမရဲ့ အမေးဖြစ်တဲ့ “ဆင်းရဲသားများထက် မွန်မြတ်တဲ့ ဆရာတော်ကြီးများကို ရွေးချယ်ပြီး လှူဒါန်းရင်း ကောင်းမည်လား” ဆိုတဲ့ အမေးကို စေတနာ သဒ္ဓါတရားအပြည့်နဲ့ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ၊ လိုအပ်တဲ့အလှူကို ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းထက် အများကို ရည်မှန်းပြီး လှူဒါန်းတာက ပိုကောင်းတယ်လို့ အကြံပြု ဖြေကြားပေးလိုပါတယ်။
။ အချိန် 7/06/2010 03:47:00 PM
၁။ ၈ပါးသီလတောင်းခံရာ၌ ဘုရားစင်ရှေ့၌ မိမိဖာသာဆိုပြီး တောင်းခံ၍ ရနိုင်ပါသလား
၂။ တပည့်တော် ဥပုသ်စောင့်တဲ့ အခါမှာမေ့ပြီး တူကလေးကို နောက်ပြောင်ပြီး ညာပြောမိပါတယ်။ သတိယတော့ ဥပုသ်ကျိုးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘုရားစင်ရှေ့မှာ ပြန်ပြီး ရှစ်ပါးသီလ တောင်းခံပြီး ပြန်ဆက်စောင့်လျှင် ဖြစ်နိုင်ပါသလား
၃။ တပည့်တော် တခြားမြို့ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းအား ၀တ္ထုကပ်လှူချင်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မသွားနိုင်သောကြောင့် လူကြုံဖြင့် ပေးလိုက်ရပါသည်။ ကိုယ်တိုင်မကပ်လှူနိုင်သောကြောင့် အကျိုးပေး နဲသွားပါသလား
A. ၁။ ၈ပါးသီလကို ဘုရားစင်ရှေ့မှာလည်း တောင်းခံပြီး ဆောက်တည်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားစင်ရှေ့မှာ ဆောက်တည်တဲ့အခါမှာတော့ အာမဘန္တေဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ ဆိုစရာမလိုပါဘူး။ အာမဘန္တေဆိုတာ အရှင်ဘုရား ကောင်းပါပြီဘုရားလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ၀န်ခံပါဠိစကား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံးဟာ ရှေ့ကတိုင်ပေးချပေးတဲ့ သီလပေးတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်များ ရှေ့မှာ သီလယူမှသာ ဆိုရမယ့် စကားလုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် တစ်ယောက်တည်း ဘုရားစင်ရှေ့မှာ သီလယူတဲ့အခါ အာမဘန္တေတွေ မဆိုတော့ဘဲ သီလတောင်း၊ နမောတဿဆို၊ သရဏဂုံဆောက်တည်ပြီး နောက်ဆုံး သီလသိက္ခာပုဒ်တွေကို ဆောက်တည်ရုံပါပဲ။ ဒါဆို ဘုရားရှေ့မှာ သီလခံယူမှု အထမြောက်အောင်မြင်သွားပါပြီ။
၂။ မုသာဝါဒနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘုရားရှင်ကတော့ သားတော်ရာဟုလာကို “ချစ်သား ရာဟုလာ မုသားဆိုလျင် ရယ်ဖွယ်မျှပင် မပြောနဲ့”လို့ မိန့်တော်မူပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် မုသာဝါဒ ကျူးလွန်မိသူဟာ မလုပ်နိုင်တဲ့ အကုသိုလ် မရှိလို့ပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါက မုသာဝါဒရဲ့ အပြစ်ကို ပြောတာပါ။ သီလသိက္ခာပုဒ်ပိုင်းမှာတော့ မုသာဝါဒကံမြောက်နိုင်တဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေ ရှိပါတယ်။ မုသားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ၁။ မမှန်သော အကြောင်းအရာဖြစ်ခြင်း ၂။ မှားယွင်းစေလိုသောစိတ်ရှိခြင်း ၃။ ထိုစိတ်ဖြင့်လုံ့လပြုခြင်း ၄။ မိမိလိမ်ညာ ပြောဆိုနေသည်ကိုသိခြင်း ဆိုတဲ့ ဒီအင်္ဂါရပ် လေးပါးလုံးနဲ့ ပြည့်စုံရင် မုသာဝဒါကံမြောက်ပြီး ဒီသိက္ခာပုဒ်လည်း ကျိုးပြတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ ဒီအင်္ဂါတွေနဲ့ မညီဘူးဆိုရင်တော့ ကံမမြောက်တဲ့အတွက် သိက္ခာပုဒ်မပျက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မုသာဝါဒသိက္ခာပုဒ်တော့ ညစ်နွမ်းပါတယ်။ ဒီလို ကျူးလွန်မိပေမယ့် အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ မပြည့်စုံတဲ့အတွက် သိက္ခာပုဒ် မကျိုးဘူးဆိုရင် ဘုရားရှေ့မှာ ထပ်ပြီးယူစရာမလိုပါဘူး။ သတိပြန်ဝင်ချိန်ကစပြီး နောင်ဒီလိုမဖြစ်အောင် ပြန်စောင့်ထိန်းမယ်ဆိုရင် ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ သတိထားရမှာက သီလသိက္ခာပုဒ်တွေဟာ တစ်ပုဒ်ချင်းယူထားရင် တစ်ခုကျိုးသွားတဲ့အခါ တစ်ခုပဲ ပျက်ပါတယ်။ တစ်ပုဒ်ချင်းယူတယ်ဆိုတာ ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ၊ အာဒိန္နာဒါန… စသဖြင့် ယူချင်းကိုဆိုပြီး ပေါင်းယူတယ်ဆိုတာက အဋ္ဌင်္ဂသမ္ပန္နံဂတံ ဥပေါသထသီလံ သမာဒိယာမိလို့ဆိုပြီး ဆောက်တည်တာကို ပြောတာပါ။ ပေါင်းယူထားရင်တော့ တစ်ခုကျိုးရင် အားလုံးပျက်ပါတယ်။ ခုနက ပြောသလို အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ညီလို့ သိက္ခာပုဒ် ကျိုးပေါက်သွားရင်တော့ ပြန်ယူပြီး ပြန်ဆောက်တည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့တာ ဆောက်တည်မှုမျိုးတော့ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ အချိန်ပိုင်း ဆောက်တည်တဲ့ ပုံစံမျိုးပဲ ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မကျူးလွန်မိအောင် ထိန်းနိုင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဥပုသ်သီလလို့ ဆိုတဲ့အတွက် ဥပုသ်နေ့တစ်နေ့လေးမှာပဲ အထူးပြု ဆောက်တည်ကြရာမှာ တစ်နေ့လုံး အစအဆုံး ထိန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အချိန်ပိုင်းအနေနဲ့ ဆောက်တည်လိုက်ရရင်လည်း ဆောက်တည်တဲ့အခိုက်မှာ အတတ်နိုင်ဆုံး သတိထားနိုင်တာ ကောင်းပါတယ်။
၃။ အလှူဒါနပြုလုပ်တဲ့အခါ အဓိကပြည့်စုံသင့်တဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေထဲမှာ စေတနာသုံးတန်ပြဋ္ဌာန်းဖို့က ပထမ အရေးအကြီးဆုံး အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်က လှူဖွယ်ဝတ္ထု သန့်ရှင်းဖို့နဲ့ တတိယအချက်က အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်မွန်မြတ်ဖို့ပါ။ ဒီအချက်တွေထဲမှာ စေတနာသုံးတန်ပြဋ္ဌာန်းမှုက ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ စေတနာလည်းပြဋ္ဌာန်း လှူဖွယ်ဝတ္ထုကလည်း သန့်စင်၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း မွန်မြတ်ဆိုရင်တော့ အလွန်အကျိုးထူးတဲ့ အလှူဒါနဖြစ်သလို အကျိုးတရားလည်း အပြည့်ရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအင်္ဂါရပ်တွေအရ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လှူမှုမလှူမှုထက် စေတနာသုံးတန် ဖြူစင်မှု မဖြူစင်မှုက ပိုပြီး အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဒီအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလည်း ရိုရိုသေသေ ပေးလှူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အချိုပေါ် သကာလောင်းသလို ပိုပိုပြီး အကျိုးကြီးစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မလှူနိုင်လို့ တစ်ဆင့်ခံလှူဒါန်းတဲ့ အခါမှာလည်း စေတနာပြဋ္ဌာန်းပြီး လှူဒါန်းနိုင်ရင် ဒီအလှူဟာ အကျိုးအပြည့်အ၀ ရစေနိုင်တဲ့ အလှူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ စေတနာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
။ အချိန် 6/29/2010 12:46:00 PM